I-Luz-i-Disorder Ivela kwi-Ego-i-Countdown to the Kingdom
I-Luz-Ingxaki ivela kwi-Ego
INkosi yethu uYesu ukuba	NguLuz de Maria de Bonilla ngo-Okthobha 12th, 2021:
Bantwana abathandekayo beNtliziyo yam eNgcwele, nihlala ngaphakathi kwamanxeba am. Ndininike inkululeko yokuhlawulela, ukuba umntu ngamnye agqibe ngokulungileyo, nokuba kokubi, ngokwalo mzuzu. Ningandisoli Mna ngento enihlelayo, kodwa zijongeni nina…. Yintoni enizisela yona njengobuntu? Uphila njani? Zeziphi izigqibo ozithathayo? Ulawula njani ukuziphatha kwakho kobuqu: yintoni owamkelayo kwaye ungamkeli buqu ngaphakathi kobuntu bakho obungaphakathi?
Ngamnye wabantwana bam uzithanda ngokwendalo, kodwa esi sizukulwana sizithanda ngendlela engacwangciswanga ngokupheleleyo. Ke ngoko, uyazingca kwaye ushumayela egameni le-ego yakho: inqaku lereferensi yi-ego yakho; iimpawu kunye nemizekelo oyinikayo phambi kwabazalwana noodade bakho njengenqaku labo lokubhekisela kwi-ego yangaphakathi ezithanda kuphela. Bantu bam: Ngaba nifuna ukuphuma ekungazini enizenza kuni ngokusebenza nokwenza ngokobuqu benu? Zithobe: oku kunqongophele kwesi sizukulwana — ukuthobeka kokwamkela ukuba nangona umntu ngamnye engumntu, awuhlali wedwa, kodwa ungqongwe ngabanye abantu, endikubizele ukuba uhlale nabo ngobuzalwane.
Indalo iyancwina kwaye inenimba, ilindele ukuba abantu baM bagcine uKholo. Umntu ulawula umntu ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu kangangokuba abaphezulu bamkele ithemba lokuzitshabalalisa kwabantwana bam okubangelwa: ukuqhomfa, ukubulawa kwabantu, izixhobo zeathom - ezona zixhobo zikhohlakeleyo ezakha zadalwa ngumntu ... izixhobo zekhemikhali, apho abantu bam baya kuba ukutywatyushwa; kwaye ngeli xesha, "izinto ezintsha" ezingaziwayo kuwe - uphawu lokuzikhukhumeza kwabantu ...
Thandazani, Bantu bam, thandazani, thandazani, ukubanda kuya kufika kwindawo enkulu yoMhlaba, kungene ethanjeni, kwaye abantwana bam baya kubandezeleka kakhulu ngenxa yoko, bengayilindelanga, kwaye bangabi namalungiselelo afanelekileyo okujongana neqabaka. cf. Isilumkiso esibandayo
Thandaza, Bantu bam, thandaza, thandaza, umhlaba uya kuqhubeka ushukuma ngamandla: uya kuphoswa ekubandezelekeni.
Bantu bam, kufuneka nizilungiselele ngaphambi kokuba iziganeko zazo zonke iintlobo ziqokelele amandla kunye nesiphithiphithi. Uyazi kakuhle ukuba abantu benza izinto ezikhohlakeleyo xa bejongene nokungazinzi. Uluntu luya kuba lungenanxibelelwano: iteknoloji iya kunqunyanyiswa ngesigqibo samandla omntu emhlabeni. Ukuthula noloyiko luya kubabamba abangandithandiyo nabangavumiyo ukuguquka kwizenzo zabo ezimbi.
Hlalani nithembekile kum; Ndamkele kuMthendeleko oNgcwele. Sukuhamba ngeendlela ezichasene neMithetho, ukuya kwiMithendeleko kwaye ngokuchasene neSibhalo esiNgcwele. Eli asiloxesha lokutolika iLizwi lam ngokokuthanda kwakho: thembeka kwiMagisterium eyinyani yeCawe yam. Sukuchitha eli xesha… Ungene kwimbandezelo enkulu.
Bantu bam, thandazani kuMama wam iRosari eNgcwele ngokuzinikela okukhethekileyo kule 13 kaOkthobha, nindithandazela imini yonke ngezi njongo zilandelayo:
-Ukuhlawulela izono zoluntu.
-Kwisibongozo malunga nokubandezeleka koluntu ngenxa yezono zabo nangenxa yendalo.
-Njengomnikelo wokucamagushela ngabantu bam kwiNtliziyo eNgcwele kaMama wam.
Bantu bam, nikhuselwe. Dibanisa ubuzalwane ngaphandle kokulibala ukuba iMikhosi yam yaseZulwini eyalelwe nguSt. Bantu Bam: Umzuzu ngumzuzu wangoku. Ndiya kukukhusela, ndikuthwele Ngentliziyo yam engcwele; musa ukoyika; buhamba ububi phambi kwam. Ndiyazisikelela iingqondo zenu ukuze zibe ngakumbi ngokomoya kwaye zibe ngaphantsi kwehlabathi. Ndiyazisikelela iintliziyo zenu ukuze zithambe kwaye zingabakhathazi abazalwana noodade wenu. Ndiya kuzisikelela izandla zakho ukuze zenze okulungileyo. Ndiyazisikelela iinyawo zenu ukuze nilandele emanyathelweni am. Hayi indlela endinithanda ngayo, bantwana, indlela endinithanda ngayo!
Musa ukoyika: Ndiyakukhusela. Yesu wakho...
Abazalwana noodade; Olu lubizo kwisazela somntu ngamnye njengabantwana beNkosi yethu uYesu Krestu: isimemo sobuqu sobudlelwane kunye nokunqwenelela okuhle kubo bonke abazalwana noodade wethu. Ukuzibona ngaphakathi kuyinto entle yokomoya esiyenzayo ngokwethu kwaye iya kusinceda ukuba sibengcono kubazalwana noodadewethu. Olu lubizo olunzima, kodwa kwangaxeshanye uthando olungenakuthelekiswa nanto lweNkosi yethu lusinika amandla okuphinda siqale okanye siqhubeke nohambo lwethu ngoKholo kwingomso elingcono.
Bazalwana, ngesicelo seNkosi yethu uYesu Krestu, umntu ngamnye okanye ngokwamaqela enu emthandazweni, masithandazeni iRosari eNgcwele enikelwe ngokwenjongo ecelwe yiNkosi yethu kwaye masihlale emthandazweni ngalo mhla, sibongoza iNceba yakhe ebusweni bomhlaba. iziganeko zendalo.
cf. Isilumkiso esibandayo
← USimona-Thandazela Ubunye
IGisella-Ukucoca kuyimfuneko →